Author: Nakazahn Meztigami
Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo horjeeda wadaniyadda iyo Soomaalinimada. Mudada kooban, dowladda Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka, iyo wasaaradaha caddaalada iyo amniga gudaha waa in ay:.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud.
Saraakiil ka tirsanaa maamulkii hore iyo ciidamada ammaanka ayaa dhowr goor u hanjabay ururada xuquuqda aadanaha, halkii ay ka shaqeyn lahaayeen ka difaacidda dumarka tacaddiyada galmada, ayna maxkamadeyn lahaayeen kuwa dembiyadaasi gala. Raridaasi ayaa dadka soo dastuugka ka dhigtay kuwo ay xaaladdooda noolaleed mugdi sii gashay, isla markaana ammaankooda sii xumaysay, caqabadna kala kulma helitaanka gargaar.
Dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa si cad u garawsan muhiimadda ay leedahay in dumarka ay ka qeyb qaataan siyaasadda, waxaana la kordhiyay xubnaha haweenka ku matalaya baarlamaanka iyo xukuumadda intii ay socotay doorashadii dhaweyd.
Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Human Rights Watch lama socoto wax dacwad ah oo sanadihii dhawaa lagu soo oogay saraakiil dowladda ka tirsan ama askarta ciidamada, kuwaasoo loo ciqaabay tacaddiyo ay u geysteen weriyayaasha, soomaailya ay jirto caddeyn muujinaysa in ay qeyb ka ahaayeen weerarrada. Waxaa loo dooran karaa xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda muwaaddin kastoo Soomaaliyeed, Muslim ah, aabihiis iyo hooyadiis Soomaali asal ah yihiin, horay an u gursan, inta uu xilka hayana guursanin qof aan Soomaali soomawliya ahayn.
Ras waa eray Amxaari ah oo u dhigma Madaxa, Tafari-na waa naaneys loo yaqaanay Xeyle Salaasi wixi ka horeeyay xiligii uu boqortooyada koray. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
Ayadoo qeyb ka ah dadaalka lagu difaacayo shacabka nugul, ayaa Human Rights Watch waxa ay ugu baaqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradaha arimaha gudaha ee federaalka iyo maamul goboleedyadaba iyo weliba maamulka gobolka Benaadir in ay:. Human Rights Watch ayaa diiwaangelisay weerarro aan kala sooc lahayn, dilal sharci darro ah oo dadka rayidka ah loo geystay, iyo xadgudubyo kale oo ay geysteen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka taabacsan ee duulaanka ku ah ururka Al-Shabab.
Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan. Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga maamuuska ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
Dowladdu waa in mudada kooban ay: Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer.
Waxaa intaa dheer in dalalka ay ciidamada ka socdaan ay ku guuldaraysteen in macluumaadka ku aaddan eedeymaha iyo baaritaannada ay sameeyeen ay la wadaagaan hogaanka AMISOM, dhinacyada kale ee ay khusayso, iyo weliba dhibbanayaasha. You are here Home.
Dowladda Soomaaliya, cjsub ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo caddaalada waa in ay qaadaan tallaabooyinkan mudada dhexe ah. Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril. Waxaana diintan Rastafari dadka rumaysan soomaaluya qabaan in boqortooyadii Itoobiya ee uu ugu dambeeyay Xeyle Salaase ay kasoo bilaabatay boqor Nabi Sulaymaan calayhi salaam, oo ay u yaqaanaan inuu yahay Yahuudi.
Ka caawisaa dadka aan awoodin ama aan rabin in ay ku laabtaan deegaannadooda, sidii ay u degi lahaayeen magaalooyinka waayen oo ay dadka u dhexgeli lahaayeen, ayadoo siinaysa hooy asaasi ah. Xildhibaano kale oo spomaaliya ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh.
Boqolaal kun oo qof oo kasoo hayaamay macluushii iyo dagaalladii xigay, iyo weliba tobanaan kun oo kale oo dhawaan kasoo cararay dagaallo, ammaan daro iyo abaar, ayaa waxa ay noolal xumo ku haysataa caasimadda iyo magaalooyin kale oo dhalka ah.
Samaynta guddi qaran oo xuquuqda aadanaha ah, waxqabad leh isla markaana madax bannaan, ayaa waxa uu gacan soomzaliya geysan karaa hormarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee heer cisub. Somalia — small improvements, big challenges December 31, Waxaa si aad ah u kooban hormarka la taaban karo ee laga sameeyay ilaalinta, caddaalada iyo in dhibbanayaasha horay ula kulmay tacaddiyada ay helaan xaqooda kuwa haatan khatarta ugu jirana laga difaaco.
Ilaalinta Warbaahinta Dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo Al-Shabab ayaa weli bartilmaameedsada howlwadeennada warbaahinta, ayagoo kula kaca cagajugleyn, dhaawac iyo weliba dil. Dacwad oogayaasha rayidka ah ayaa soomasliya qaar ku guuldaraystay in ay difaacaan dastuurkx shakhsiyaadka ay NISA kusoo qabato howlgalladeeda ka dhanka ah wararka xasaasiga ah iyo xorriyada hadalka.
Siyaasad sanadkii laga soo saaray barakaca, taasoo dhigaysa in maamulka uu dadka soo barakacay difaaco marka xoogga lagu rarayo, isla markaana inta badan waafaqsan sharciga caalamiga ah, ayaanan si rasmi ah loo ansixin ama aan la taaba-gelin.
Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka.
soomaliya Samaynta Guddi Adag soomaalia Madax bannaan oo Xuquuqda Aadanaha ah Samaynta guddi qaran oo xuquuqda aadanaha ah, waxqabad leh isla markaana madax bannaan, ayaa waxa uu gacan ka geysan karaa hormarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee heer qaran. Ajnabi dalka waa ka noqon karaa madaxweyne Qorshe Waxaa aad muhiim u ah samaynta ciidan boolis oo awood leh, lalana xisaabtami karo, kaasoo suga ammaanka asaasiga ah iyo xaqiijiyana xaqa ay dadka leeyihiin, gaar ahaan kuwa bulshada ugu nugul.
Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in dastuurkw laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira. Diinta ay aaminsan tahay haweenaydaas. Dowladdu waa in mudada dhexe ay ka shaqeysaa xaqiijinta dib u habaynta dhinacyada ammaanka iyo garsoorka:.
Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa ku daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub.
Soomaaliya waa in ay qaadaa dhammaan tallaabooyinka daruuriga ah si ay carruurta uga saarto ciidamadeeda, ayna si wanaagsan ula dhaqanto oo ay u difaacdo carruurta ay adeegsadaan ururka Al-Shabab iyo ururada haybaysan ee dowliga ah ama aan dawliga ahayn. Man to watch in December 27, Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka laga hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Shirka London ee dhacaya ka Mey ee diiradda lagu saari doono dib u habaynta ammaanka Soomaaliya, ayaa fursad muhiim u ah maamulka cusub iyo howlwadaagiisa caalamiga ah in ay ballanqaadaan oo ay si degdeg ah u ansixiyaan tallaabooyin wax ku ool ah oo gacan ka geysan kara ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka. Xukuumadda iyo baarlamaanku waa in mudada dhexe ay: